Fikradda naqshadaynta jimicsiga 24 ee ugu wanaagsan ee dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Sawirada weyn ee muruqyada waxaa sameeya xirfadlayaasha loo tababaray si loo hubiyo inaad haysato naqshadda ugu fiican. Haddii aad ka walwalsan tahay dadka ka soo jiidaya meelo aan fiicnayn oo ka soo raynaya bowdooda, markaa waa inaad ka taxaddirtaa qolka aad ku socotid si aad uhesho.
1. Fikradaha Suugaanta Maskaxda ee Macaayadaha
Elephant fikradda #kaadka hoose waxay noqotay mid ka mid ah kuwa jecel dumarka jecel duur joogta. Isku-dhafka naqshadaha dibadda waa waxa ka dhigaya in uu u muuqdo mid aad u qaboobo maqaarka. Midabka maqaarka ee maqaarka ma saameynayo quruxda qalinka.
2. Fikradda Fikrad u Horseed ee Haweenka
Farasta oo la socota jewelies waxay arki kartaa quruxda gabadha oo kaliya. Raadinta jinsiga waa fardaha ay ka caawin karto gabadhu inay ku guulaysato bowdada marka la socoto ubaxyo.
3. Fikradda Bulshada ee Skull Thigh Tattoo loogu talagalay gabdhaha
Mudanayaasha waxaa laga yaabaa inay rabaan inay noloshooda ku daraan dheelitirooda mindhicirka iyagoo bowdooda ku daraan marka ay ku daraan ubaxyo. Midabka casaan ee ubaxyada ayaa siinaya dharka xayawaanka.
4. Fikradda dheeriga ah ee balaastigga ah ee loogu talagalay dumarka
Dufanka ayaa ah xayawaanno qurux badan iyo marka ay ku qoranyihiin maqaarka gabdhaha, midabada loo isticmaalo in lagu dhejiyo balastarka iyo caleemaha ku wareegsan waa waxa ka dhigi kara tattoos-bawdada jilicsan.
5. Shimbiraha iyo Foornada Caanaha Tattoo ee haweenka
Shimbirta guduudan iyo midabada ubaxyada badan ee leh shimbiraha midabada leh ayaa ah waxa ka dhiga bawdada mid aad u qurux badan oo cajiib ah oo ka muuqda maqaarka haragga.
6. Libaaxa qaboojiyaha boqorka lafdhabarta fikradda macaamiisha
Dumarku waxay ka faa'iideysan karaan libaaxa boqorada ah ee ku yaala qalin qori ah sida qof kasta oo arka arinta ay doonayso in uu ku qoro. Fikradda ayaa sidoo kale loo habeyn karaa iyadoo la raacayo dhadhanka dhadwalka.
7. Shimbiraha tattoo quruxda naqshadeynta bawdada
Dareenka haadda shimbiraha ku jira fikradda bowdada ayaa beddeli kara muuqaalka gabadha bikrada ah. Midabka shimbiraha iyo qoryaha dhirta dhirtu waxay sameeyaan bowdada si ay u eegaan firfircooni iyo qabow.
8. Gem fikradda naqshadeynta bawdada
Naqshadeynta mulkiilaha ee bowdada waxaa kaliya oo lagu gaari karaa tattooist xirfadle ah oo soo saari kara hal abuurka hal meel, bowdada.
9. Baaritaanka midabka iyo Rose Thigh Tattoo ku calaamadee fikradaha gabdhaha
Qodobka ugu sareeya ee fikradda gawaarida gawaarida ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo gabadha doonaysa in ay macluumaadka u gudbiso adduunka mar kasta oo ay bowdadiisu soo baxdo.
10. Saddex sariirood oo dhaadheer ah ayaa lagu dhejiyaa macaamiisha
Saddexda sariirood ee caleemaha ubaxu waa kuwo qurux badan oo fudud si ay u sawiraan noocyo kala duwan oo ka mid ah sawirada muruqyada ba'an ee isticmaala midabyo badan.
11. Ubax leh midab leh iyo libaax madow ah oo tafaftiran
Dabeecadda mugdiga ah ee libaaxa iyo midabyada ubaxa waxay sameeyaan gabadh bikrad ah oo gaboodfal ah oo leh cadaan cad oo ah in libaaxu uu marayo.
12. Jabhadda Jarmalka ee Koofiyada Tattoo Cilmiga Naqshadeynta Dumarka
Waxaad u eegi kartaa gabadh ka duwan tattoo jilicsan ee jiifka ah kaasoo ka dhigaya mid ka mid ah dadka ka soo horjeeda adiga oo aan dhawaaq sameynin.
13. Fikrado la yaab leh oo foojignaan ah oo loogu talagalay gabdhaha
Dumarka foorjiga ah ee miisaanka tattoo ayaa si fiican ugu muuqan kara bowdada gabadh kaas oo ka mahadnaqa waxyaabaha wanaagsan ee nolosha.
14. Fikirka Maqalka Maqaalka ah ee Wanaagsan
Midabada maraakiibta ee badhtamaha badmaaxa waxaa ugu fiican in lagu qoro mulkiilaha naqshadeynta. Tani waa mid ka mid ah tattoosyada ugu wanaagsan ee aad u isticmaali karto gabadha.
15. Naqshadeynta jilicsan ee jilicsan ee bowdada sare
Tattoo cufan ee tattoo ayaa ka muuqatay midabkiisu casaan ku dhexjirta ubaxyada kale ee weli qurux badan.
16. Naqshadeynta midabada madow iyo midab madow ee labada lugood
Fikradda ah midabkan midabkiisu yahay # midabka weyn ee bowdada waa inaad hubisaa inaad ka duwan tahay kuwa kale. Siyaabaha ay midabada isku dhafan yihiin waa mid cajiib ah.
17. Awesome awoowe oo cajiib ah oo tilmaan ah naqshadeynta naqshadeynta
Diyaarso wax yar oo duurka ah oo leh gabadh yar oo shaashado ah oo leh shaashadda xayawaanka #idea taas oo noqon karta cabsi iyo cabsi isku waqti ah.
18. Gabdhihii qosolka ahaa ee batay tattoo
Naqshadeynta tattoo noocan ah waa mid aan la adkeyn karin, mana aha inay noqoto mid adag. Dumarka isticmaalaya fikradan tattoo ayaa ah marwalba runta ah.
19. Lion Face Tattoo ink fekerka farshaxanka ee bowdada
Libaax ayaa wajaheysa fikradda sawirrada sawirka ee sawirka bowdaha haweenku muujinayso awoodda haweeneyda aan la hadli karin.
20. Riyada riwaayadda ee dhinaca talaagada ee gabdhaha
Dareemaha sawir qaadaha waa feker aad isku dayi karto bowdadaada haddii aad diyaar u tahay inaad marka hore ku dhejiso.
21. Fikradda baqdinta baqdinta cirifka muraayadda dumarka
Roobabku waa shimbiro waaweyn oo aad u qurux badan. Isticmaalka baalasha foosto ee maqaarka ayaa si fudud u sheegaya in aad u mahadsantahay nolosha iyo quruxda.
22. Fikradda naqshadaynta dusha sare ee roodhiga ee hablaha ee gabdhaha
Fikradda bawdada sare ee riddada cirridka ayaa ah mid ka mid ah qaababka tattoo-awaashka ah ee uu qof kastaa rabo inuu isticmaalo.
23. Shimbir, Ubax oo soo dir jadwalka tattoo jilicsan ee naqshadeynta bawdada
Waxyaabaha isku dhafan sida tan micnaheedu waa hal shey oo uu qofka xiran yahay uu ka warqabo wax-soo-saarka soo saarista ugu fiican ee qof kasta oo isticmaal ah.
24. Naqshadeeynta ubaxyada dhirta ee gabadha
tattoo dheemanTattoos Wadnahasawirada malaa'igtalammaanahatattoo ah octopusJoomatari Tattooslaabto laabtasawirrada raggajimicsiga bisadahaTattoo infinityarrow Tattootattoo tilmaantattoos sleeveku dhaji tattoostattoos saaxiib saxa ahtattoos qabaa'ilkashaatiinka shiidangadaal u laabotattoosTilmaamta jaalaha ahtaraagada kubbaddatattoos eagletattoos iskutallaabtatattoos gacantatattoo indhahasawirada gabdhahatattoos ubaxhenna tattootattoos qorraxdatattoos taajkiimuusikada muusikadalibto libaaxsawir gacmeedwaxaa la dhajiyay tattoosshimbir shimbirtattoos moonfikradaha tattoocalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoo biyo ahkoi kalluunkatattoos qosol lehtattoos qoortatattoos cagtaDhaqdhaqaaqaTartoo ubax badantattoo maroodigaTattoo Feathergaraacista gacmahanaqshadeynta mehndiwaxay jecel yihiin tattoos